TAFIKA MANAKAIKY VAHOAKA: Miseho amin’ny endrika maro ny Fandraisana andraikitra – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:59
Accueil/Fanadihadiana Manokana/TAFIKA MANAKAIKY VAHOAKA: Miseho amin’ny endrika maro ny Fandraisana andraikitra
TAFIKA MANAKAIKY VAHOAKA: Miseho amin’ny endrika maro ny Fandraisana andraikitra
Nanomboka afakomaly, dia netsehina avokoa ireo vondron-tafika, nanatanteraka fisafoana amin’ny alina, teto Antananarivo an-drenivohitra. Mahatratra 100 mahery ireo miaramila manatontosa izany, ary miaraka amin’ny fiara miisa efatra, raha ny nambaran’ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude, Lehiben’ny Etamazaoro ny Tafika malagasy.
Stanislas R. 29 octobre 2020
Fantatra fa taorian’ny fivoahana tanaty fihibohana ireny, dia nivoaka nanaraka izany koa ireo jiolahy sy mpangalatra. Ankoatra ireo, miezaka manome modely eny anivon’ny fiarahamonina ny avy ao amin’ny Tafika Malagasy. Ankoatra ny fandriampahalemana iandraiketan’izy ireo, nanatanteraka hetsika fanadiovana hiatrehana ny fahavaratra teny amin’ny fokontany maromaro tao anatin’ny boriborintany fahatelo izy ireo, omaly. Hitsinjovana ny fahasahiranan’ireo mponina sy ireo mpivarotra eny amin’ny fokontany Besarety, Anjanahary ary Mahavoky, izay anisan’ny toerana dibo-drano rehefa fotoam-pahavaratra dia miezaka misoroka izany ny teo anivon’ny Tafika Malagasy. Nambaran’ny Cema, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude hatrany fa « nahetsika ny avy any amin’ny faritra avaratra, ary mbola hisy hetsika koa ny avy amin’ny faritra Atsimo, izany hoe, Antananarivo sy ny manodidina mihitsy ». Natao izao hetsika izao hanampian’ny Tafika ny sivily, iatrehany ny fiainana andavanandro, ankoatra ny fanaovan’ny Tafika fanatanjahantena.
Nidina ifotony nanentanana ireo olona hanadio ny manodidina izy ireo. Ho fanomezan-tanana sy ho fiaraha-mientana amin’ny vahoaka, dia nanatanteraka fanadiovana tamin’ireo fokontany ireo ny miaramila avy ao amin’ny Vondron-tafika mitoby avy ao Ampahibe, isan’izany ny avy ao amin’ny CPC, 1° RG, RAS ary ny R3A, omaly vao maraimbe.
Manampy ny olon-drehetra amin’ny lafiny samy hafa, ny Tafika
Nitarika izany ny Lehiben’ny Tafika an-Tanety, ny Jeneraly Rakotoniaina Jean Aimée, niaraka tamin’ireo lehiben’ny Rezimanta miisa efatra. Nodiovina avokoa ireo toerana mety iangonan’ny fako, toy ny lakandrano, lalankely. Namendrahana ranom-panafody ihany koa ny tsena sy ireo toerana maro, toy ny trano fidiovana ary ny sekoly. Notolorana fitaovana faendrahana fanafody miisa 10 miaraka amin’ny ranom-panafody koa ireo fokontany ireo, mba hanohizan’izy ireo ny fisorohana amin’ny valanaretina samihafa.
Manampy amin’ny fitsaboana ireo mpiray tanindrazana ny Tafika
Tsy andeferana ireo tsy manara-dalàna…
Hentitra ny Cema, Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude, nanazava ny amin’ireo miaramila tsy manara-dalàna na mihoa-pefy. Misy lafiny roa ny fitrangany, eo ny amin’ny fitondran-tenany ilay miaramila manokana, fa ny iray manaraka dia ny fandrangitan’ireo manampahefana eny ifotony. Vahaolana natao izany, dia nezahina ny tsy hametrahana ny miaramila iray mihoatra ny enim-bolana amin’ny toerana iray, fa misy mpandimby izy avy eo. Mahakasika ireo tsy manara-dalàna indray. Tsy nitsitsy fitenenana ny Lehiben’ny Etamazaoro ny Tafika. « Tsy andeferana ireo rehetra tsy manara-dalàna, raha resaka vono olona na mifandraika amin’izany, dia manaraka ny dingana ara-pitsarana izy ireo. Manampy izay dia miala izy amin’ny resaka dosie ara-miaramila. Ny filankevitry ny famotorana no manala azy, arakaraka ny gradiny », hoy izy nanamafy. Tsy andeferana mihitsy ny resaka tsy manara-dalàna, na dia eo aza ny filazana fa ny saonjo iray lohasaha, tsy ilaozan’izay hamarara.
hopotehina tsy ho ela ireo basy tsy ara-dalàna rehetra tafaverina amin’ny Etamazaoron’ny Tafika
FARITRA ATSIMO ANDREFANA : Mandrindra ny fandriampahalemana ny fisian’ny « Dinabe »